Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Ole Gunnar Solskjear Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha ya "Onye Nwunye".
Anyị Ole Gunnar Solskjear Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Man United Legend and Manager gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara ọ nọ n'etiti ndị a ma ama na Traffordlọ Nzukọ nke Old Trafford. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Ole Gunnar Solskjear nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Ole Gunnar Solskjear Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Ole Gunnar Solskjaer na 26th nke February 1973 nne ya, Brita Solskjaer na nna, Oivind Solskjaer na West Coast nke Norway. N'okpuru ebe a bụ nne na nna Norwegian dị mpako Ole Gunnar.
A mụrụ Solskjaer n'ime ezinụlọ egwuregwu na ezinụlọ dị umeala n'obi. O tolitere na obere agwaetiti Kristiansund na East Norway.
Dabere na Manchester Evening News, papa ya bu Greco-Roman onye mgbagha onye meriri Norway maka afọ ise.
Cheta na: Greco-Roman mgba bụ ụdị mgba nke na-egbochi njide n'okpuru ukwu ya ma na-asọ mpi ọ bụla nke asọmpi asọmpi oge okpomọkụ emere kemgbe 1908
Nna Solskjaer bụ Oivind bụ onye No 1 Greco-Roman gbara mgba nke Norway n'etiti 1966-71. Na mbido, ọ bụ olile anya Solskjaer na nwa ya nwoke ga-agbaso nzọụkwụ ya.
N'ụzọ dị mwute, ịgba mgba siri ike maka Ole dị ka nwatakịrị. Ọ gbalịrị egwuregwu ahụ ruo afọ atọ mana ogwe aka ya megidere ya ka ọ na-agbasi mbọ ike i toomi ihe nna ya rụzuru.
N'ihi obere osisi ya, obere ndị Solskjaer na-adọnye ya nke ọma site na ndị ọgbọ ya.
Ndị nne na nna nwere ọmịiko maka nwa ha nwoke nke nwetara aha mbụ "Tiny Ole“. Ha kpọrọ asị mgbe ndị iro na-atụgharị ya mgbe niile.
N'ịbụ ndị zuru ezu, ma Brita na Oivind siri ọnwụ na nwa ha nwoke kwesịrị ịhapụ egwuregwu ahụ. Nke a hụrụ njedebe dị mwute nye ọgbọ ịgba mgba.
Ole Gunnar Solskjear Biography - Nlekọta Ọrụ Nke Mbụ:
E wezụga ịgba mgba, Ole nwere ịhụnanya ọzọ, nke ahụ bụ football. Ọbụna ọ na-ehi ụra na bọl kwa abalị, MA enweghị ike itinye ya n'ọrụ.
Otú British Football na-egosi Ignited His Passion for Soccer:
Itinye oge dị ukwuu na-ekiri telivishọn mere ka ọ hụ ịhụnanya na egwuregwu bọọlụ.
Javier Hernandez nwa akụkọ akụkọ na-enweghị ihe ọhụụ
Karịsịa n'ime ha bụ Satọde Egwuregwu BBC nke Day nke a na-amagharị na Norwegians, ihe omume egwuregwu kacha ọhụrụ na England.
Ọzọkwa, a na-ebuga mmemme egwuregwu bọọlụ nke Britain dịka Magazin bọọlụ Bekee, Shoot na Match Weekly na Norway n’oge ahụ.
“M na-edetu akwụkwọ niile na otu egwuregwu sitere na Match of the Day. N'oge ụfọdụ, amatara m ihe niile banyere football na England, ” kwuru Ole onye mbụ ịhụnanya bụ Liverpool (Na-agba ya nwayọọ nwayọọ!)
Mgbe o lesịrị football na TV, ihe na-esote bụ nwata Solskjaer na-agba bọl na-enweghị njedebe na ájá na gravel pitch n'akụkụ ụlọ ya.
Ọ dịghị oge tupu ndị mụrụ ya emee ka ọ mee mkpebi banyere egwuregwu ọhụụ ọ hụrụ.
Ole Gunnar Solskjear Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Nraranye Solskjaer na talent ọhụụ hụrụ ya mgbe ọ dị afọ 8 na-edebanye aha na klọb nke obodo ya dị ka nwata.
Clausengen bụ obere osisi dị n'obodo ahụ nke a maara na-eme ka ụmụaka nweta nnukwu aha n'ihi ụzọ ha si ejikwa talent.
Naanị mgbe ọ banyere na klọb ahụ, e nwere asịrị na ọ nwere ike ọ gaghị eme ya n'ihi ogo ya.
N'ụzọ dị mma, mgbe ọ dị afọ iri na ụma, Solskjaer malitere ịgbanye onwe ya ma buru ibu.
Ọ ghọrọ onye siri ike ma sie ike mana ọ kaghị mma ịbanye n'òtù egwuregwu ọbụlagodi na a kwalitere ya na football.
Ọ bụ ezie na e nwere ndị otu na ndị chọrọ ịgba chaa chaa ma were ya.
Onye a ma ama bụ onye na-akwado Manchester City Aage Hareide onye nwere mmasị na Ole ma nwee obi ike ịkwaga ya na nnukwu ụlọ ọrụ.
Mgbe o mechara 31 nke ihe mgbaru ọsọ 47 nke Clausengen n'otu oge egwuregwu, Hareide (nke dị n'okpuru ebe a) aghaghị ịpị bọtịnụ iji jide talent ya.
Ole Gunnar Solskjear akụkọ ndụ eziokwu - tozọ a ma ama:
N'ihi Aage Hareide, Ole na 1995 wegara onwe ya na Molde, otu ụlọ ọrụ Norwegian Aage Hareide jisiri ike. Nke a bụ ụlọ ọgbakọ o mechara jikwaa, ebe ọ zụrụ azụ Erling Haaland.
N'ụlọ ọgbakọ ahụ, ọ gara n'ihu na-eme ọfụma dịka onye na-ama goolu na Norwegian Premier League. Ihe nzuzo Ole bụ ọrụ siri ike ya na ike ịrụ ọrụ na mpụga klọb na-eme ọrụ nzuzo.
Nke a bụ oge, ọ na-achọ ime nke ọma n'agbanyeghị ihe ọ bụla. Solskjær nwekwara nnukwu ọchịchọ banyere England.
O di nwute maka Hareide, Solskjaer enweghi ndu na-agha ya ogologo oge. Iche ihe mgbaru ọsọ 31 anya na 38 anya dọtara ndị na-egwu egwuregwu Premier League bụ ndị gbara ya gburugburu dị ka sharks- n'etiti ha United.
Ole Gunnar Solskjear Biography - Bilie na-ewu ewu:
Mgbe ọdịda iji nweta Alan Shearer, Man United na 29 July 1996 kpebiri inweta Ole Gunner Solskjear bụ onye nọ n'oge ahụ amaghi na mpụga ala nna ya.
Naanị egwuregwu ole na ole na-egwuri egwu, ọ bịara doo ndị na-akwado ya anya na United nwetara otu ahịa kachasị mma na akụkọ ihe mere eme na klọb.
Solskjaer mechara nweta 18 Premier League ihe mgbaru ọsọ maka United na oge mbụ ya.
Oge kachasị na Norwegian bụ mgbe ọ gara n'ihu na-atụle ihe mgbaru ọsọ mmeri na-emeri oge Bayern Munich na 1999 UEFA Champions League nke Ikpeazụ.
Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ nyeere United aka ijide Treble na n'ezie, onye mere ka aha ya sie ike na ụlọ nzukọ ndị ama ama.
Solskjaer na-agwụcha ya na obere nwa ya dị ka onye mgbasa ozi Britain kpọrọ ya "Onye gburu mmadụ".
Agbanyeghị, akụkọ nwoke United United nwere mmasị ka echeta ya dị ka “super-sub“. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ole Gunnar Solskjear na Silje - Akụkọ nke ndị hụrụ ha abụọ n'anya:
Mgbe ọ na-egwu United, Solskjaer bi na Bramhall ya na nwunye ya mara mma aha ya bụ Silje.
Alụmdi na nwunye nke di na nwunye na ụmụ atọ gọziri agọzi; Noa, Karna na Elaija.
Nwa Solskjaer, Noa kwupụtara na mgbasa ozi na papa ya abụghị onye ọkpụkpọ kachasị amasị ya. N'oge ahụ, Noa họọrọ ịkwado Wayne Rooney karia nna nke aka ya.
Ole Gunnar Solskjear Ndụ nke Onwe:
Mata mara ndụ nke Ole Gunnar Solskjear ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Mgbe ị na-eche banyere Norway obodo ya, ị nwere ike iche n'echiche ntutu isi, ọmarịcha mma, ọtụtụ ịkụ azụ na n'ezie Ọ B certainlyGH Military ndị agha.
Ị maara?… Solskjaer abanyela otu afọ nke agha agha nke malitere n'oge ọ bụ 19 afọ.
Nkwado nke ndi isi:
Na 2008, Solskjaer ghọrọ onye na-eto eto Norwegian natara ya Ndị na-ahụ maka ọkwa mbụ nke Royal Norwegian Order of St. Olav nke King Harald V nke Norway dere.
Solskjaer bụ pewe iwe na onyinye a na ememe na 25 October 2008 n'obodo ya bụ Kristiansund. Solskjaer bụ onye nke kachasị nta mgbe ọ nabatara ndị isi, na-enyekarị ndị obodo a ma ama na afọ ha.
Iguzosi Ike n'Ihe:
Solskaer nọrọ na Old Trafford n'agbanyeghị na klọb ndị ọzọ gosipụtara mmasị n'ebe ọ nọ karịsịa na 1998. Solskjaer n'agbanyeghị ịbụ onye nnọchi anya jụrụ onyinye niile n'agbanyeghị Manchester United ọbụna ịnakwere onyinye maka akụkọ ahụ.
Ihe nke abụọ nke iguzosi ike n'ihe:
Oge ọzọ dị mkpa na ọrụ ya bụ mgbe ọ mere onye ọ bụla ọkachamara na-arụ ọrụ na aha ịkwụsị ohere nke onye iro ya.
Solskjaer mere nke a ebe ọ maara na ọ ga-enweta kaadị uhie. Ndị na-agba bọọlụ hụrụ nke a dị ka ihe atụ doro anya banyere otu Solskjaer si tinye klọb karịa mmasị onwe onye.
Ole Gunnar Solskjear Eziokwu:
Ọ na-ejide British Record:
Na 2 August 2008, mmetụta uche njirimara njirimara n’agbata Man United na Espanyol ka asọpụrụ Solskjær na Old Trafford.
Egwuregwu mmetụta uche ahụ dekọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị 69,000 Fans na-abịa ma debe ndekọ dị ka egwuregwu nke abụọ kachasị na-aga na akụkọ ntụrụndụ Britain.
Nchịkọta Ọrụ Nchịkọta:
Ị maara?… Solskjaer malitere ịkụzi ọbụna mgbe ọ bụ onye ọkpụkpọ maka United.
N'oge ahụ n'oge ọkọchị, Solskjaer ga-alaghachi na Norway ka ọ bụrụ onye nchịkwa na Statoil Academy, ụlọ akwụkwọ sekọndrị maka ndị na-eto eto nwere olile anya.
Mgbe ezumike nká, Solskjaer jụrụ otu oge iji jikwaa Norway, na-ekwu na ọ bụ 'ngwa ngwa'.
Dị ka onye nchịkwa, Solskjaer meriri aha Norwegian n'oge mbụ ya maka Molde na 2011. O meriekwa okpukpu anọ dị ka njikwa nke United nke Jesse Lingard na Paul Pogba nọchitere anya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Ole Gunnar Solskjear Ụmụaka akụkọ na akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile